Burbur wayn oo ka muuqda wadada isku xirta Garoowe iyo Galkacyo. (Daawo sawirada) – Radio Daljir
Juunyo 23, 2012 2:55 b 0
Garoowe, June 23 – Wadada laamiga ah ee isku xirta magaalooyinka Galkacyo iyo Garoowe ee dawladda Puntland ayaa si wayn u burburtay xilligii dawlad la?aanta, taas oo ay uga sii dareen roobabkii Guga ee dhawaan da?ay. ?
Qaybo badan oo wadadaasi ka mid ah ayaa boholo isu badashay waxaana jirta caqabad wayn oo ay kala kulmaan baabuurta isticmaasha siiba kuwa xammuulka oo isaga kala goosha deegaanada Puntland, koonfurta Soomaliya iyo dhulka Soomalida Itoobiya.
Hay?adda waddooyinka Puntland ee Nesha ayaa dib u dhis ku samaysay meelo ka mid ah wadadaas, laakiin arrinta ayaa u muuqata ?Faanoole fari kama qodna? waxayna qayb ka tahay burburka guud ee gaaray dalkeenna Soomaliya.